Enye yezinto zokuqala eziza engqondweni xa usiva Ukuhanjiwa kawonke-wonke, kuxinene kwaye kushushu iibhasi, imigca, kunye nokugcwala. kunjalo, Izithuthi zikawonke-wonke eYurophu ayizizo iibhasi kuphela kodwa ziitram kunye noololiwe. Abanye abakhenkethi bakhetha ukuqesha imoto, kunokuhamba, kodwa izithuthi zikawonkewonke eYurophu zikhululekile kakhulu, ukufika ngexesha, cheap, kwaye yacetyiswa.
Imirhumo uya kuthi hlawula kwaye utshintshe imali iyakubiza, ke kungcono wenze uphando lwakho kwi-intanethi ku-eamanqaku atshintshanayo. kwakhona, ungasoloko ubuza kulwamkelo lwakho lwehotele, bayakonwabela ukucebisa iingongoma zemali ethembekileyo kwindawo. Kuyacetyiswa ukuba utshintshe ngokwaneleyo uhambo olusuka kwisikhululo seenqwelomoya, kunye nemali eya kugubungela eyokuqala 1-2 iintsuku zohambo lwakho.
Ukuba uchitha ixesha elithile uphanda ngaphambi kohambo lwakho, uya kuzinyanga ngamava angenakulibaleka okupheka. ngaphandle, ukuzama ukutya okumnandi, ungagcina ii-dimes ezimbalwa, endaweni yokutyibilika kwindawo yokutyela yokuqala ngeenxa zonke. Ikofu entle, khekhe, ukutya kwasekuhlaleni, kunye nezitya ezithandekayo ngamaxabiso ahlekisayo, unokuba kufutshane nekona.
Izixeko zaseYurophu ziyaziwa ngokuba mihle, kodwa kunye Ukuqokelela, imigibe yabakhenkethi, kunye neendlela ezahlukeneyo zokukhohlisa abakhenkethi. Ukuntywila Uhlahlo-lwabiwo mali lokuhamba phakathi uhambo lwakho losuku ibhegi, ekhuselekileyo, kunye nekhadi letyala yeyona ndlela yokuhamba ngokukhuselekileyo kwaye wonwabele.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Iimpazamo zokuhamba ezili-10 ekufuneka uzithintele eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-mistakes-avoid-europe%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)